Al Shabaab oo shuruud ku xiray sii deesmada Sarkaal Kenyan ah oo gacanta ay ku hayaan | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Al Shabaab oo shuruud ku xiray sii deesmada Sarkaal Kenyan ah oo gacanta ay ku hayaan
Xoogaga Shabaab ayaa waxa ay shuruud ku xireen sii deesmada Sarkaal ka tirsan Dowladda Kenya oo Shabaab ay gacanta ku dhigeen sanadkii 2013 Bishii May, sida ay xaqiijiyeen ehelada Sarkaalkaasi.
Shabaab ayaa Sarkaalkaan oo Booliska Kenya ka tirsan ka qafaashay Damajaleh oo ka tirsan Liboya Kenya, kuna dhaw xadka Somalia iyo Kenya ay wadaagaan, xilli Shabaab halkaan ay ka fuliyeen weerar qorsheysan.
Joseph Maritim oo ah Aabaha dhalay Sarkaalkan Kenyanka ayaa u sheegay Wargeyska The Standard ee dalka Kenya kasoo baxa in wiilkiisa oo gacanta Shabaab ku jira muddo labo sano ah uu aad ugu walaacsan yahay.
Wuxuu sheegay in Dowladda Kenya ay ka gaabisay sidii ay uga shaqeyn laheyd sii deesmada wiilkiisa, isaga oo intaasi ku daray hadalkiisa in xitaa Mushaarkii uu qaadan jiray Dowladda Kenya ay ka jartay.
Joseph Maritim, ayaa ku waramaayo isaga oo aanan helin aqbaarta wiilkiisa in Shabaab ay lasoo xiriireen, ayna u sheegeen sababta ay wiilkiisa ay u haystaan, isaga oo sheegay in xubnaha Shabaabka ee lasoo xiriiray ay u sheegeen in Dowladda Kenya cadaadis ay ku saaraan sidii ciidankeeda ay ugala soo bixi laheyd dalka Somalia.
Aabaha dhalay Sarkaalkaas ayaa sheegay in muddo 5-daqiiqo ah Shabaabka ay taleefoonka ku wada hadlayeen balse Shabaabka ay ku adkeysteen Shuruuda ah in ehelada Sarkaalkaasi Dowladda Kenya ay ku cadaadiyaan in ciidamadeeda ay kala soo baxdo Somalia.
Dowladda Kenya qudheeda ayuu ku eedeeyay Joseph Maritim inay ka gaabisay sidii ay uga shaqeyn laheyd sii deesmada wiilkiisa, isaga oo intaasi raaciyay in caruurta uu dhalay Sarkaalkaasi oo 7 gaaraya Iskuulka looga eryay lacag la’aan awgeed, maadaama Aabahii u shaqeyn lahaa uu xiran yahay.
Sarkaalka Shabaabka ay haystaan ayaa lagu magacaabaa Fredrick Chirchir , dadiisa waa 58-sano jir.